Yini i-gut microbiota? Amathiphu ama-3 wokuyithuthukisa | Bezzia
UToñy Torres | 12/10/2021 20:00 | Amathiphu ezempilo
Impela uzwe kaningi ngezimbali zamathumbu nokuthi kubaluleke kangakanani ukukuvikela ukuze ujabulele impilo enhle. Hhayi-ke, lokho okwaziwa kakhulu njenge-flora yamathumbu, yilokho ngokwesayensi okwaziwa njenge-intestinal microbiota. Incazelo yaleli gama ngokuyisisekelo iqoqo (elikhulu) lamagciwane ahlala emathunjini.
I-gut microbiota yakhiwa izigidigidi zamagciwane amancane njengama-bacterium, ama-virus, isikhunta, kanye nezimuncagazi. Phakathi kwemisebenzi ye-microbiota kukhona leyo kumunca i-calcium nensimbi, kukhiqiza amandla futhi kusivikele ekuhlaselweni kusuka kwamanye amabhaktheriya namagciwane angaba yi-pathologies. Ngaphezu kokufeza imisebenzi ehlukahlukene ekuthuthukiseni amasosha omzimba.
1 Yini i-gut microbiota futhi yakhiwa kanjani
1.1 Ungayithuthukisa kanjani i-microbiota
Yini i-gut microbiota futhi yakhiwa kanjani
I-gut microbiota yehluke ngokuphelele kumuntu ngamunye, ukwakheka okuhlukile okwakhiwa ngesikhathi sokubeletha. Umama udlulisa zonke izinhlobo zamagciwane ngesikhathi sokubeletha, ngokusebenzisa isitho sangasese sowesifazane noma indle uma kukhulunywa ngokulethwa kowesifazane. Noma ama-microorganisms asemvelweni uma kukhulunywa ngokulethwa kwe-cearean. Lokho wukuthi, i-microbiota iqala ukwakheka kusukela ngesikhathi sokuzalwa.
Kodwa-ke, ngaleso sikhathi kuqala inqubo ezothatha iminyaka ukuthi iqedwe. Phakathi neminyaka emithathu yokuqala yokuphila, amagciwane akha i-microbiota yamathumbu ayahlukahluka. Futhi kuze kube mdala lokhu kuhlukahluka nokuzinza kuzoqhubeka, okuyi izokwehla futhi yehle njengoba ifinyelela ekuvuthweni. Imisebenzi ye-microbiota ibalulekile ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuyithuthukisa nokuyivikela impilo yonke.
Imisebenzi ye-microbiota yezempilo yomuntu ibalulekile, empeleni, ibhekwa njengengxenye esebenzayo yomzimba. Lokhu kwakhiwa kwama-microorganisms kusebenza ngokubambisana namathumbu futhi ligcwalisa imisebenzi emine emikhulu.
Lungiselela ukugaya: isiza amathumbu uku umunce izakhamzimba njengoshukela, amavithamini noma ama-fatty acids abalulekile, phakathi kwabanye.
Kubalulekile ekuthuthukiseni uhlelo lokugaya ukudla: Esigabeni sokuqala sobuntwana nasezinganeni, i-microbiota isabuthakathaka futhi nohlelo lokugaya alukakhuli. Ngakho-ke, kufanele kunakekelwe ngokukhethekile amagciwane angangena ohlelweni lomntwana ngokudla, ngamanzi noma ngokuxhumana nezindawo ezingcolile.
Kwakha isithiyo esivikelayo: kuqhathaniswa amanye amabhaktheriya asongelayo izinto eziphilayo ziphila emzimbeni womuntu.
Qinisa ukuzivikela: i-microbiota yamathumbu iyasiza qinisa amasosha omzimba, esivikela kumagciwane nakwigciwane.
Ungayithuthukisa kanjani i-microbiota
Kunezindlela eziningi zokuthuthukisa nokuqinisa i-microbiota yamathumbu, ngoba kumayelana nokwakha uhlobo lwethonya kulo mphakathi wamagciwane, ukwenza ngcono impilo yabo ukuze bakwazi ukufeza imisebenzi yabo kahle. Indlela yokwenza ngcono izimbali zamathumbu es isamba semihlahlandlela elandelayo:
ukondla: Ukusetshenziswa kokudla kwemvelo, okungenazinto ezinobungozi ezingalimaza impilo ye-microbiota. Landela, uqhubeke ukudla okuhlukahlukene, okulinganiselayo nokulinganiselayo lapho ukudla kwemvelo kugcwele khona, iyindlela engcono kakhulu yokulondoloza impilo kuwo wonke amazinga.
Ama-Probiotic: Kunjalo ukudla noma izithasiselo ezinamagciwane aphilayo ezisebenzela ukuthuthukisa nokunakekela izimbali zamathumbu.
Ama-prebiotic: kulokhu kungukudla nge okuqukethwe okuphezulu kwefayibha enikeza izakhamzimba ze-microbiota yamathumbu.
Umzimba ugcwele amagciwane amancane ahlala ezingxenyeni ezihlukene zomzimba, njengolimi, izindlebe, umlomo, isitho sangasese, isikhumba, amaphaphu noma umgudu womchamo. Lezi zidalwa zikhona ngoba zinomsebenzi othile futhi obalulekile esimweni ngasinye naku- ukujabulela impilo enhle kuyadingeka ukuvikela amagciwane asemzimbeni. Landela ukudla okunothe ngezithelo nemifino, kanye nokudla okune-fiber encibilikayo, ngoba kuthanda ukukhula nokusebenza kwamagciwane amancane emathunjini.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Amathiphu ezempilo » Yini i-gut microbiota? Amathiphu ama-3 wokuyithuthukisa